Malunga nathi-Iqela leZonyango iBaoding Jizhong
Njengomxhasi weqela laseJizhong lamayeza, I-Hebei Teamtop Pharmaceutical Co, Ltd ibandakanyeka kuthengiso lwaphesheya nolwentengiso yehlabathi ngazo zonke iimveliso ezenziwe liQela.
Yasekwa ngonyaka ka-1992, iQela leMithi iJizhong ibelikhokela kunyango lwezilwanyana i-induhlala ngaphezulu kweminyaka engama-27. Njengomthengisi omkhulu wamachiza eenkukhu kunye nomvelisi wamayeza aphezulu wezilwanyana ezi-3 e-China, silishishini eliphakamileyo lesizwe kunye nophawu oludumileyo kweli shishini. Sivelisa ikakhulu iAlbendazole Bolus, iAlbendazole yokuSuswa, i-Enrofloxacin In sindion, i-Oxytetracycline Injection, i-Inverion ye-Ivermectin, amayeza e-GMP kunye nezilwanyana ...
Ineziseko ezi-6 eziqinisekisiweyo zeMveliso ye-GMP, iindibano zocweyo ezili-14 kunye nemigca yemveliso engama-26, eli qela liphuhlise uluhlu lweemveliso ezithandwayo lijikeleze iChina kunye neemarike phesheya. Ukuza kuthi ga ngoku sakha indawo ebanzi, yamanqanaba amaninzi nesebenzayo yamakhasimende athembekileyo abathengisi abangama-4000, ii-culturists ezingama-60000, iifama ezinkulu ezingama-2500 zokufuya kunye namaqela angama-56, asungula ubudlelwane bentsebenzo nge-90% yamashishini amakhulu okufuya eTshayina nokuthumela kumazwe asuka eMzantsi Merika, Umzantsi mpuma weAsia, eAfrika nakuMbindi Mpuma.
Ngo-2014, i-Chinese Herb Medicine yeZiko loBunjineli boThengiso lweZilwanyana kunye neTekhnoloji yePhondo i-Hebei sele ivunyiwe.
Ngo-2013, iBaoding Jizhong Biological Technology Co, Ltd yaqala ukwakha.
Ngo-2012, i-Hebei Teamtop Pharmaceutical Co, Ltd yasekwa yaza yasebenza. I-Tianjin Haowei Biological Technology Co, Ltd yaqala ukwakha.
Ngo-2011, iZiko leMichiza leShijiazhuang lasekwa kwaye lasetyenziswa.
Ngo-2009, iTianxiang Biological & Pharmaceutical Co, Ltd kunye neLanlight Herb Co, Ltd yaphumelela ukuhlolwa nokwamkelwa nguMphathiswa Wezolimo.
Ngo-2008, iZiko loPhando laseBeijing lasekwa.
Ngo-2007, iSebe lokuThengisa laseJizhong lamiselwa.
Ngo-2006, iindibano zocweyo ezi-5 kunye ne-7 yemigca yokuvelisa yafezekisa imigangatho ye-GMP eguqukayo.
Ngo-2003, iJizhong yaba yinkampani yokuqala eTshayina abaphumelele iGMP (static) ngomgangatho omkhulu.
Ngo-1993, iJizhong Pharmaceutical Co, Ltd yabekwa kwimveliso.
Ngo-1992, iJizhong Pharmaceutical Co, Ltd yabhaliswa kwaye yaqala ukwakhiwa.
Siza kuqhubeka sikhokela eli shishini, sizibophelele ekulandeleni “sinconywa kakhulu luluntu, sihlonitshwa kakhulu ngabalingane kunye nabasebenzi”, kwaye senza iinzame zokuba yinkampani enkulu yeqela elinobugcisa obudumileyo, isidima kunye nentembeko, ukukhusela ishishini lokufuya langoku.